Misy izao ny kinova Djay maimaimpoana amin'ny Android | Androidsis
Algoriddim dia mandefa ny kinova maimaim-poana an'ny Djay ho an'ny Android
Androany ny tontolon'ny DJ ha niova be tamin'izay efa folo taona lasa izay izay DJ malaza dia nampiasa turntables marika Technics mahazatra ho fitaovana tsara indrindra. Ny tontolon'ny dizitaly dia nanova izany rehetra izany ary ankehitriny ny ankamaroan'izy ireo dia manindry ny USB azy ireo hanombohana ny fivoriana ary hanaporofoana ny lanjan'izy ireo amin'ny alàlan'ny turntables izay mifandray mivantana amin'ny latabatra mba haka tahaka ny hoe ahoana ny fandefasana hira amin'ny fotoana mety na koa fampisehoana. vokany. devoly.
Amin'izao fotoana izao dia misy ny kinova maimaim-poana amin'ny fampiharana tsara ho an'ny DJ. Ny ekipan'ny fampandrosoana Algoriddim dia nanambara androany ny fanombohana ity kinova vaovao an'ny fampiharana djay malaza ho an'ny Android ity. Ny kinova maimaimpoana dia miavaka amin'ny fanohanana feno amin'ny fanafarana mozika Spotify, izay mamela ireo mpampiasa izay misoratra anarana amin'ity serivisy ity handefa ny hirany eo noho eo "eny ambonin'ny rivotra" eo noho eo.
1 Fanohanana fitaovana fampitaovana USB
2 Fampiharana ho an'ny DJ
Fanohanana fitaovana fampitaovana USB
Ankoatry ny fampisehoana an'ity kinova vaovao maimaim-poana ity dia misy fiasa vaovao tonga, izay azontsika atao ny manasongadina ny fanohanana ireo fitaovana audio USB miaraka amina output stereo marobe, misaraka ny fampidirana preamp nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fifangaroana efa misy sy ireo tsy ampy taona hafa. Ireo fiasa vaovao ireo dia ho an'ny fitaovana miaraka amin'ny Android 5.0.
Una vaovao tsara ho an'ireo izay mifangaro sy ny tontolon'ny techno, electro na trano ho iray amin'ireo fialambolin'izy ireo ankafizin'izy ireo ary amin'ny alàlan'ny rindrambaiko iray avy amin'ny Android dia afaka mankafy ny feo azo atao tsara indrindra izy ireo raha te hampiasa ny fitaovana ivelany misy azy ireo.
Fampiharana ho an'ny DJ
Ity fampiharana ity dia manana fiasa lehibe toy ny fampidirana ny tranomboky mozika, tolo-kevitry ny hira marani-tsaina, effets audio manokana toa ilay flanger malaza, mixer, filters, fampitoviana amin'ny feo ary koa ny maody modely amin'ny inona ilay mixer. Fampiharana iray manontolo izay ahafahanao mampifangaro ireo Mp3 izay anananao manana lanja lehibe ary raha efa mifandray amina ekipa tsara ianao dia mety ho fianan'ny fety amin'ny hetsika miaraka amin'ireo namanao.
Raha ny momba ny inona ilay fampiharana voaloa, misy zava-baovao miaraka amin'ny Android 5.0 Lollipop miaraka amin'ny tohano ny famoahana feo maro fantsona ary ny mpanara-maso DJ Pioneer DDJ-WeGO3 DJ ankoatra ny zavatra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Algoriddim dia mandefa ny kinova maimaim-poana an'ny Djay ho an'ny Android
[Lahatsary] Telegram Plus mety ho fanentanana lehibe tsy nananan'ny Telegram. Atorinay anao ny fomba fampiasana azy